News Collection: रञ्जनाको नखराले श्याम रनक्क
रञ्जनाको नखराले श्याम रनक्क
निर्देशक श्याम भट्टराई र उनकी धर्मपत्नी अर्थात् नायिका रञ्जना शर्माबीचको लुकामारी पनि बुझिनसक्नु छ। कहिले विवाह त कहिले डिभोर्स अनि कहिले फेरि एक साथ। सिनेमाको कथाजस्तै यो जोडीको फेरि नयाँ कुरा बजारमा आएको छ।
अहिले श्याम नेपालमा छन् भने रञ्जना अमेरिकातिरै रमाइरहेकी छिन्। श्यामले नै दुःखसुख गरेर रकम जोरजाम गरिदिएपछि रञ्जना अमेरिकातिर गएकी थिइन्। तर, खोला तर्‍यो लौरो बिर्स्यो भनेजस्तै क्रमशः श्यामलाई बिर्संदै गएकी छिन् रञ्जनाले।
पहिले–पहिले त फोनमा अनि फेसबुकमा पनि कुरा हुन्थ्यो रे, चाँडै फर्कंदै छु पनि भन्थिन् रे उनी। तर, अहिले न त फोनमा छिन् न त फेसबुकमा छिन् रञ्जना। श्याम भन्छन्, 'कसैले उतै विवाह गरी रे भन्छन् त कसैले के भन्छन्? नानाभाँतीका कुरा सुन्दासुन्दा मेरो त कानै पाकिसक्यो। अब उसैसँग नभेटी कसको कुरा पत्याउने?' श्यामले भने।
अचम्म त श्यामलाई के लागेको छ भने रञ्जनाको फेसबुक फ्रेन्डलिस्टबाट आफ्नो नाम हटेको छ। 'किन उनले मेरो नाम हटाइन्? त्यो कुरा आश्चर्यमा परेको छु। त्यसो त रञ्जना फेसबुकमा पनि छैनन् आजभोलि,' श्यामले भने।
अमेरिकामा जे गरेर बसे तापनि श्याम स्पष्ट हुन चाहन्छन्। नेपाल फर्कने हो कि होइन? र उनको आगामी जीवनबारे रञ्जनाको प्रस्ट विचार आएमा यता आफूलाई पनि टेन्सन हुँदैनथ्यो र आफू पनि ढुक्क हुन्थेँ। तर, कुरा अस्पष्ट हुँदा आफू दोधारमा परेको कुरा श्यामले बताए। दिनैपिच्छे रञ्जनाबारे खुल्न नसकेका र गलत कुराहरू सुन्दा आफ्नो काम गर्ने उत्साहमा पनि कमी आएकोमा चिन्तित छन् श्याम। 'मानिसले त्यो समय मात्र प्रगति गर्न सक्छ जब उसको दिमागी हालतमा तनाव हुँदैन र ऊ स्पष्ट छ, दिमागभरि तनाव लिएर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ?' श्यामको भनाइ छ।
त्यसो त श्याम आफू रञ्जनाबाहेक पनि जीवन जिउन सक्ने दाबी गर्छन्। 'म सानैदेखि जन्मदिने परिवारबाट टाढा रहेर सङ्घर्ष गरेको मान्छे हुँ। रञ्जनालाई त मैले सफलतालाई अङ्गीकार गरेपछि चिनेको हुँ। त्यसैले ऊ बिना श्याम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरोबारेमा बाहिर चलाइएका हल्ला गलत हो। म उसको जीवन र भावी बाटोबारे स्पष्ट मात्र हुन खोजेको हुँ,' श्यामले भने। विदेश गएकी श्रीमती न त सम्पर्कमा छिन् न त सम्पर्क गरेर हालचाल नै सुनाउँछिन्। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रहेका श्रीमान् तनावमा हुनु अवश्य पनि नौलो कुरा होइन। 'त्यसैले म आफ्नो जीवनको गाडी स्पष्ट भएर चलाउन चाहन्छु। दुनियाँको कुरा सुन्दा दिक्क भइसकेँ,' श्यामले भने।